Amnesty International oo ku baaqday in Cadaalada la marsiiyo Wasiir Janan - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Amnesty International oo ku baaqday in Cadaalada la marsiiyo Wasiir Janan
Amnesty International oo ku baaqday in Cadaalada la marsiiyo Wasiir Janan
War Caawa kasoo baxay Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International qeybteeda Bariga Afrika, ayaa loogu baaqay Dowladda Federaalka Soomaaliya inay ‘xaqiijiso in caddaaladda la horgeeyo Cabdirashii Janan’ oo maanta la sheegay inuu soo galay gacanta dowladda.
Waxaa ay sheegtay in xadgudyo ka dhan ah xuquuqda Aadanaha uu ka geystay gobolka Gedo loona baahan yahay in sharciga la marsiiyo.
“Hadda oo Cabdirashiid Janan uu soo galay gacanta Dowladda Federaalka Soomaaliya, masuuliyiinta dowladda waa inay xaqiijiyaan in caddaalad iyo isla xisaabtan loo helo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee lagu eedeeyay [Janan] inuu ka geystay gobolka Gedo. Dhibbaneyaasha iyo qoysaska ay dhibaatadu gaartay waxay mudan yihiin caddaalad,” ayaa lagu yiri war saxaafadeedka Amnesty International
Degmada Beled-Xaawo ee Gobolka Gedo waxaa maanta lagu soo dhaweeyay wasiirkii hore ee Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ( Janan).
Cabdirashiid janan ayaa Wasiiro ka tirsan Xukuukadda xilgaarsiinta waxaa ay kasoo gelbiyeen degaanka Najax ee Duleedka degmada Beled-Xaawo, waxaana la socda Gaadiidka dagaalka iyo Ciidamo farabadan.
Previous articleCiidanka Booliska oo soo bandhigay Koox burcad ah
Next articleDHAGEYSO:- Barnaamijka Barashada Habka Haboon ee Beeraha 25-03-2021